Ithegi: iarhente yentengiso | Martech Zone
Ithegi: iarhente yentengiso
NgoLwesine, Novemba 3, 2016 Douglas Karr
I-IBM yokuThengisa ifu ikhuphe i-2016 yeNtengiso ye-imeyile yeemetriki yeBenchmark Study. Ingxelo ibonelela ngedatha eya kukuvumela ukuba uthelekise imikhankaso yakho ye-imeyile kuwo onke ama-25 avulekileyo, ucofe-kuluhlu, uluhlu lweemfonomfono kunye neemethrikhi zeselfowuni. Ukongeza, ingxelo ine: Ukuthelekiswa okuthe ngqo kumzi-mveliso kunye nokuqhekeka kwejografi kwihlabathi liphela Ukusetyenziswa kwesixhobo, iindlela zeholide, ii-imeyile zentengiselwano kunye namaxabiso okubandakanya kwiBenchmark ngaphaya "komndilili," kubandakanya ii-quartiles eziphakathi kunye neziphezulu ezisebenzisa le datha kunye neendlela ezilungileyo ezinxulumene noko ukuphucula imeyile yakho
Iindlela ezili-14 zokuChaphazela iiArhente
NgoLwesithathu, Matshi 4, 2015 Douglas Karr
Ukusukela ukuba sisebenzisa iarhente yethu ukunceda iinkampani zetekhnoloji yokuthengisa, siyayazi yonke into yokuqhuba kakuhle izilingo kunye neembandezelo zeshishini learhente. Njengearhente ye-boutique, sinethuba lokuba sikwazi ukukhetha kakhulu kubaxumi bethu. Kwelinye icala, sihlala sisokola kuba iinkampani zeshishini azifuni ukulinganisa enye iarhente kumxube wabo wentengiso. Sikhe sazonwabisa ngokujonga abathengi abanomdla kwishishini lethu. Kodwa kuzo zonke
Hayi, heck. Ndicinga ukuba ndiza kuqala ishishini lokuthengisa!
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 3, 2010 NgoMgqibelo, Oktobha 18, 2014 UNick Carter
Ufumana ntoni xa uxuba inqanaba eliphezulu lokungabikho kwemisebenzi kunye nabantu abafunde kakhulu (abanye bathi bafunde kakhulu)? Abacebisi, kunjalo. Zininzi zazo. Emva kwayo yonke loo nto, ukuba ubukwintengiso yequmrhu kangangeminyaka engama-25 apho ubenethamsanqa ngokwaneleyo ukuba umqeshi wakho akuhlawulele ukuze ube “yinkosi yolawulo lwamashishini” kanye phambi kokuba bayeke ukukubhatala ngokupheleleyo… ngubani olunge ngakumbi ukuqhuba inkampani yokuthengisa ! Kukho isiqhulo esisebenzayo kwi
Ukujonga iiReferensi zakho zeNtengiso kwi-Intanethi
NgoLwesibini, Novemba 24, 2009 NgoLwesithathu, Oktobha 15, 2014 Douglas Karr
Enye yezinto ezintle malunga nentengiso ekwi-Intanethi kukuba umsebenzi wakho uvulelekile ukuba umhlaba ubonwe. Ngenxa yokuba injalo, indenza ndizibuze ukuba zeziphi iinkampani, iiarhente, kunye noorhulumente wengingqi yethu abacinga xa beqesha uncedo. Kulula kakhulu ukubeka phambili ukuthengisa okusebenzayo kwi-Intanethi: Ukuba ujonga iFinjini yokuSebenzisa ngokuKhangela, yeka ukujonga! Ezona femu ze-SEO zibalaseleyo ziiarhente ezi